Directory, Design Website Website & SEO - Business Directory
Fahasalamana sy fialamboly
Fiantsenana sy serivisy
Lisitry ny lahatahiry
Alefaso ny lisitra
Ny lisitray dia manome anao orinasa maro izay mety mila fanampiana avy aminao. Manome serivisy web koa izahay: ao anatin'izany ny serivisy famolavolana tranokala, amin'ny serivisy fanatsarana pejy, serivisy SEO, fampandrosoana rindrambaiko manokana, sns. Azonao atao ny mahazo matihanina amin'ny fifampidinihana hamoronana kaonty ho an'ny mpampiasa, hanaovana fampielezan-kevitra momba ny haino aman-jery sosialy sy zavatra hafa rehetra. Azonao atao ny manakarama serivisy SEO izay hanampy anao hametraka ny tranonkalanao eo ambonin'ireo motera fikarohana lehibe toy ny Google, Bing, Yahoo ary ny motera fikarohana hafa mitovy amin'izany. Ny consultants anay dia afaka manampy anao hanana laharam-pahamehana marimaritra iraisana ary hanampy ny olona hahita ny tranonkalanao.
Biraon'ny tranokala fandraharahana
Ny Search Engine dia nanamora ny fitadiavana zavatra amin'ny fomba mahomby, raha vao mikaroka ianao dia afaka mahita valiny fikarohana an-tapitrisany amin'ny motera fikarohana lehibe toy ny Google, Yahoo ary Bing, sns. Manampy amin'ny fikarohana orinasa, serivisy na vokatra mety tian'ny olona hovidiana.
Ny lisitray dia ahafahan'ny orinasa na tompona tranokala manampy ny tranokalany ao amin'ny lahatahiry. Rehefa ampidirina amin'ny lahatahiry ny orinasa dia miasa ihany koa izy toy ny backlinks amin'ny tranokala lehibe ary mampitombo ny fahefana domain. Ny fampiasana ny serivisy SEO mety dia miantoka ny fahafahanao mahazo avo kokoa noho ny mpifaninana aminao amin'ny resaka valin'ny motera fikarohana.
Misy lafin-javatra SEO marobe izay tsy maintsy arahin'ireo tranonkala mba hahazoana antoka fa afaka mitana toerana ambony kokoa amin'ny motera fikarohana izy ireo. Arakaraka ny isan'ny antony ahafahan'ny tranokala manatsara ny tranokalany no ahafahany mahazo avo kokoa noho ireo mpifaninana aminy. Amin'ny fampiasana serivisy SEO, zava-dehibe ho anao ny fahalalana momba izany. Ny lisitray dia manome anao matihanina SEO izay afaka manampy anao amin'ny fakan-kevitra momba ny SEO sy serivisy SEO izay hanampy ny tranonkalanao hitana toerana ambony amin'ny valin'ny motera fikarohana. Na mikasa ny hanangana tranokala ianao na efa manana tranokala nefa mila fanatsarana, ny fandraisana mpiasa matihanina avy amin'ny lisitra lahatahiry no safidy tsara indrindra.
Famoronana tranokala fandraharahana
Fantaro bebe kokoa momba ny tranokala Seo
Ny fizotran'ny SEO (Search Engine Optimization) dia fomba handrakofana ireo anton-javatra maro kokoa ary tsara kokoa noho ireo tranonkala mifaninana.
Serivisy amin'ny solosaina
Desktop, Fitaovana finday & finday
Ireo solosaina sy gadget maoderina dia manavao hatrany ny saika isan'andro, ny solosaina dia misy amin'ny habe samihafa, miaraka amin'ny rindrambaiko sy fitaovana isan-karazany, endri-javatra fanampiny, sns. Ny fanavaozana amin'ny fotoana dia zava-dehibe raha te hampiasa ny toerana sy ny endri-javatra rehetra atolotry ny teknolojia ianao.
Raha dinihina ny famahana ny fitaovana samihafa dia zava-dehibe ny ananan'ny tranonkala iray manatsara ny tenany mba hifanaraka amin'ny fitaovana rehetra fa tsy hiavaka manokana amin'ny karazany iray. Ity dia ampahany manan-danja amin'ny kaody amin'ny tranokala, izay mahatonga ny tranokala hifanaraka amin'ny fitaovana rehetra, hahatonga azy io haingana sy hamaly ary hitandrina ny kaody madio
Ny serivisy amin'ny solosaina dia misy koa ny serivisy fanamboarana, fikojakojana, fanavaozana ary fanavaozana izay hiantohana ny solosaina hiasa tsara foana. Manome anao manam-pahaizana manokana ny lahatahiry anay izay afaka manampy anao amin'ny vahaolana amin'ny fanamboarana solosaina, ny olana, ny fanavaozana, ny fifampidinihana mba hampitomboana ny hafainganan'ny solosaina sy hanatanterahana ireo zavatra ilaina hafa.
Bebe kokoa momba ny solosaina
Desktop & Solosaina finday
Fitaovana tanana sy kely kokoa
Ilaina ny serivisy fanamboarana solosaina rehefa manomboka mahita olana ao amin'ny solosainao ianao noho ny olana amin'ny hardware na rindrambaiko.
Fanatsarana ny solosaina
Ny fampidirana na fanavaozana kapila mafy, RAM, karatra misy sary sns, na fanavaozana ny lozisialy toa ny windows, ny fisie media sns dia zava-dehibe satria manampy amin'ny fandefasana solosaina tanteraka.
Ny solosaina dia fitaovana elektronika ary mitovy amin'ny fitaovana hafa, mila fikojakojana tsy tapaka koa izy io. Izany dia manondro ny fanadiovana ny fitaovana sy rindrambaiko hampitombo ny hafainganan'ny solosaina, ny fanavaozana azy ireo rehefa zava-dehibe, sns
Fanamboarana ny solosaina
Azonao atao ny mieritreritra ny hanary ny olanao samirery, saingy ampirisihina ianao hanakarama matihanina izay afaka manome anao fampahalalana sy serivisy ilaina mba hialana amin'ilay olana.
Lisitra Directory na Business Directory
Ny lahatahiry anay dia manangona lisitry ny matihanina sy ny manam-pahaizana izay afaka manome anao vahaolana ho an'ireo olanao, afaka manampy amin'ny fitantanana ny orinasanao amim-pahombiazana ary manolotra fakan-kevitra.
Ao amin'ny tranokala iray, ny sary, horonan-tsary ary ny atiny no zavatra hita amin'ny tranokala. Ankoatr'izany, zavatra hafa hitanao amin'ny tranokala dia noforonina tamin'ny fampiasana ny fiteny kaody fototra. Manana ny safidinao ianao hitady ireo sehatra CMS na mpanangana tranokala an-tserasera izay afaka manampy anao mamorona na mamorona tranokala mora. Na izany aza, ireo endrika modely ireo dia noforonina tamin'ny fampiasana ny fiteny kaody fototra ary azonao atao koa ny manitsy ny maodely mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ny fampifangaroana ireo fiteny kaody ampiasaina dia tsy tokony hiteraka lesoka na hampihena ny hafainganam-pandehan'ilay pejy, tokony hanahirana izany.
Misy karazana tranokala roa azo noforonina
Static Site - Ireo no tranonkala pejy tokana amin'ny ankapobeny misy atiny miovaova na miorim-paka. Miova ihany ny atin'ny tranokala rehefa novaina tanana izy ireo.
Site Dynamic - Ireo dia tranokala izay mandeha amin'ny angon-drakitra, izay havaozina mandeha ho azy rehefa ampidirina ao anaty tranonkala ny atiny na pejy. Ny tranokala dia heverina ho mpifanerasera bebe kokoa amin'ny mpampiasa sy ho tia milina fikarohana.
Bebe kokoa momba ny tranonkala
Fanamafisana Coding Ho an'ny SEO
Isaky ny Adiny iray
Tetikasa isaky ny vidiny
isaky ny fonosana
Bebe kokoa ...
SEO ao amin'ny pejy
Mila consultation ve ianao?
Ny fahalalana mazava tsara ny fizotrany sy ny zavatra azo atao dia afaka manampy amin'ny fitsitsiana vola sy fotoana amin'ny safidy mety.
SEO dia manondro ny Search Engine Optimization; izy io dia iray amin'ireo singa tsy mitombina indrindra amin'ny laharana tranokala amin'ny motera fikarohana. Misy dingana maromaro azo raisina mba hahatonga ny tranonkala SEO ho sariaka; manomboka amin'ny fividianana sehatra izany, ny fahazoana mpizara fampiantranoana mahita ireo fiasa sy fotodrafitrasa atolony ary mamorona tranokala misy kaody madio sy marina.
Raha te hanana kaody madio sy marina dia mety mila manana fahalalana momba ny fanaovana kaody ianao na mahita mpahay kaody manokana hamoronana tranokala famoahana haingana izay milina fikarohana sy mifampiresaka ho an'ny mpampiasa ihany koa. Zava-dehibe ny SEO satria mampifanaraka tranokala izany ary ahafahany mahazo valin'ny fikarohana tsaratsara kokoa.
Misy karazany roa ny SEO -
Izany dia ahitana ny fanatsarana ny fisie, ny atiny ary ny haino aman-jery ao amin'ny tranonkalanao, misy ny fanatsarana ny pejy, ny fanampiana ny atiny sy ny tag, sns.
Ny fananganana rohy, ny fandefasana backlinks, ny fandefasana lisitra lahatahiry, sns. Dia ampahany amin'ny SEO ivelany. Manampy tranokala iray hananganana fahefana sy hanana toerana ambony kokoa amin'ny motera fikarohana.
Bebe kokoa momba ny SEO
Kaody nohavaozina & Tags ilaina
Lisitra eo an-toerana, mpitsidika, rohy mankany aoriana
Mila consultation SEO?
Ny fampahalalana mazava momba ny SEO (Search Engine Optimization) dia manomboka amin'ny làlana marina.
Search Engine sy ny fandefasana Directory
Mba hahatonga ny tranonkala iray ho anisan'ny World Wide Web ary hiseho amin'ny valin'ny fikarohana dia zava-dehibe ny mandefa ny URL amin'ny lisitra Search Engine sy Directories. Ny motera fikarohana sy ny reperitoara dia ampiasaina amin'ny fandefasana feed site ihany koa. Ny fandefasana lahatahiry sy ny fandefasana motera fikarohana dia heverina ho iray amin'ireo tetika tsara indrindra hananganana fahefana an-tsehatra ary hampalaza ny tranonkalanao.
Rehefa mamorona tranokala vaovao ianao dia lasa zava-dehibe ny mandefa ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana. Misy ny motera fikarohana izay mitaky fandefasana tsy tapaka isaky ny pejin-tranonkala vaovao izay ampidirinao ao amin'ny tranonkalanao, fa misy tranokala hafa kosa mila anao fotsiny mandefa ny URL-n'ny tranokalanao ary mandady amin'ny pejy izy ireo mba handefa azy ireo ho azy. Ny fandefasana lahatahiry dia manondro ny fandefasana ny tranokalanao amin'ny lahatahiry samihafa miorina amin'ny sokajy sy sokajy.
Rehefa manana orinasa ianao dia mamorona tranokala mampiasa ny fiteny kaody fototra; ataonao ao an-tsaina ny fanatsarana ary manatanteraka ny tranokala. Ny zavatra manaraka ifantohana dia ny laharana ambony amin'ny valin'ny motera fikarohana. Ny fananganana rohy sy ny fandefasana backlinks dia teknika ivelany SEO izay tokony hifantohanao mba hanananao antoka fa manana fahefana ambony noho ny mpifaninana aminao ianao.
Azonao atao ny mankafy ny tombony amin'ny fandefasana ny tranokalanao na ny orinasanay amin'ny lahatahiry aminay amin'ny sokajy sy sokajy misy ifandraisany, izay ahafahan'ny mpanjifa mety mahita ny tranokalanao na ny orinasa mora aminao.
Bebe kokoa momba ny fandefasana
Engine Engine & Direct Directory
Fandefasana tranokala hikarohana milina
Tianay handefa tranokala indray mandeha na mandeha matetika amin'ny motera fikarohana sy lahatahiry amin'ny Internet?
Lisitry ny lisitry ny tranokala orinasa
Alefaso ny lisitry ny tranokala ao amin'ny sokajy tadiavina sy sokajy misy fanazavana, sary famantarana ary sary
Fandraisana an-tanana ny tranokala
Te handefa tranokala amin'ny Directory Directory maimaimpoana?
© 2020 Zo rehetra voatokana,Fitsipika momba ny fiainana manokana sy fepetra